Picos de Europa တွင်ကြည့်ရမည့်သဘာဝအလှများနှင့်လှပသောကျေးရွာများ ခရီးသွားသတင်းများ
ဘာ Picos de Europa မှာကြည့်ရမလဲ
လူးဝစ် Martinez | 10/09/2021 11:00 | ခရီးသွားလုပ်ငန်း, Espana
အကြောင်းပြောဆိုပါ Picos de Europa တွင်ကြည့်ရမည့်အရာများ ၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသဘာဝရှုခင်းများ၊ ကျက်သရေရှိမှုနှင့်ခမ်းနားထည်ဝါသောတောင်တန်းများနှင့်ပြည့်နေသောကျေးရွာများကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအရာများအားလုံးသည်ဤတောင်တန်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်၌အလွန်များပြားသဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပေါင်းစပ်ရန်ခက်ခဲသည်။
မှပိုင်ဆိုင်သည် Cantabrian တောင်တန်းများPicos de Europa သည်León, Cantabria နှင့် Asturias ပြည်နယ်များကိုဖြတ်သန်းသောကြီးမားသောထုံးကျောက်များဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာ၎င်း၏နေရာအများစုကိုပေါင်းစည်းထားသည် Picos de Europa အမျိုးသားဥယျာဉ်Tenerife ကျွန်းပေါ်က Teide ပြီးရင်စပိန်မှာဒုတိယလည်ပတ်မှုအများဆုံး (ငါတို့ဒီမှာမင်းကိုထားခဲ့မယ် ဤ Canarian ပန်းခြံအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်).
1 Picos de Europa တွင်လည်ပတ်ရမည့်အရာ - အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတောင်များမှရိုးရာကျေးရွာများသို့
1.1 Covadonga နှင့်ရေကန်များ
1.2 Poncebos နှင့် Garganta del Cares၊ နောက်ထပ်အံ့စရာတစ်ခု
1.3 Bulnes နှင့် Urriellu
1.4 Hermida တောင်ကြား
1.5 Santo Toribio de Liébana၏ဘုန်းကြီးကျောင်း
1.6 Picos de Europa တွင်တွေ့ရမည့်နောက်ထပ်အံ့သြစရာအချက်များ
Picos de Europa တွင်လည်ပတ်ရမည့်အရာ - အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတောင်များမှရိုးရာကျေးရွာများသို့
Picos de Europa ကိုဒြပ်စင်သုံးခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် အန်ဒါရာဗဟို၊ သို့မဟုတ် Urrieles များ အနောက်တိုင်းသို့မဟုတ် ထောင့်မရ။ ဘယ်ဟာကပိုလှတယ်ဆိုတာငါတို့မပြောနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူတို့အားလုံးမှာမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်မရှိမဖြစ်လည်ပတ်မှုတွေအကြောင်းမင်းကိုပြောပြနိုင်တယ်။ သူတို့ကိုကြည့်ရအောင်။
Picos de Europa အားဖြင့်သွားလျှင် Cangas de Onís၇၇၄ ခုနှစ်မတိုင်မီအထိ Asturias နိုင်ငံ၏မြို့တော်၊ သင်တောင်ထိပ်သို့ရောက်လိမ့်မည် Covadongaယုံကြည်သူများအတွက်ဝတ်ပြုရာနေရာနှင့်၎င်း၏ဒဏ္icalာရီဆန်ဆန်နှင့်သမိုင်းကြောင်းပဲ့တင်ထပ်မှုများကြောင့်မဟုတ်သောသူများအတွက် ရှောင်လွှဲ၍ မရသည့်လည်ပတ်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကြီးမားသော esplanade ပေါ်တွင်သင်တွေ့လိမ့်မည် Santa María la Real de Covadonga ၏ Basilica၁၉ ရာစုမှခေတ်သစ်လက်သစ်ဆောက်လုပ်ရေးသည်သစ်သားဘုရားကျောင်းဟောင်းကိုအစားထိုးခဲ့သည်။ ပြီးတော့သူလည်းပါတယ် San Pedro ကျောင်းတိုက်၎င်းသည်သမိုင်းဝင်အနုပညာအမှတ်အသားဖြစ်ပြီး Romanesque ဒြပ်စင်များကိုထိန်းသိမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အပိုင်း၊ San Fernando ၏ Royal Collegiate ဘုရားကျောင်း ၎င်းသည် ၁၇ ရာစု မှစ၍ တစ်ခုလုံးကိုကြေးရုပ်တုဖြင့်ပြီးစီးသည် PelayoCruz de la Victoria နှင့်အတူ obelisk တစ်ခု၊ Asturias ၏အထိမ်းအမှတ်နှင့် Campanona ဟုခေါ်သောအမြင့်သုံးမီတာနှင့်အလေးချိန် ၄၀၀၀ ကီလိုဂရမ်ရှိသည်။
သို့သော်အထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူများအတွက်ဟိန္ဒူဘုရားသို့လာရောက်လည်ပတ်ပါ သန့်ရှင်းသောဂူပုံ၏နေရာတွင်၊ Covadonga ၏အပျိုကညာ Pelayo ကိုယ်တိုင်သင်္ချိုင်းဟုယူဆရသည်။ Covadonga တိုက်ပွဲကာလအတွင်း Goth သည်ဤနေရာ၌သူ၏အိမ်ရှင်များနှင့်အတူခိုလှုံခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။
ဤအထင်ကြီးစရာနေရာကိုလည်ပတ်ပြီးနောက်သင်သည်ဆယ့်နှစ်ကီလိုမီတာသာဝေးသောရေကန်များသို့တက်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်နှစ်ခုရှိတယ်၊ Ercina နှင့် Enol သူတို့သည်တောင်များနှင့်စိမ်းလန်းသောဒေသများ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသည်။ သင်သည်ကားများ (ကန့်သတ်ချက်များဖြင့်) သို့မဟုတ်ခမ်းနားသောတောင်တက်လမ်းများမှတဆင့်သင်တက်နိုင်သည်။
Poncebos နှင့် Garganta del Cares၊ နောက်ထပ်အံ့စရာတစ်ခု
Poncebos သည် Cabrales ကောင်စီမှသင်ပိုင်ဆိုင်သောသေးငယ်သောတောင်ပေါ်မြို့ဖြစ်ပြီးအံ့မခန်းရှုခင်းများမှတဆင့်သင်ရောက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျက်သရေအပြည့်ရှိသည်၊ သို့သော်၎င်း၏အဓိကအရည်အသွေးမှာ၎င်း၏အစွန်းတစ်ဖက်၌တည်ရှိသည် အဆိုပါဂရုစိုက်၏လမ်းကြောင်း.
ဤခရီးသည်သင့်အားစည်းလုံးစေသည် ကာဣနLeónပြည်နယ်၌ရှိပြီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အရှည် ၂၂ ကီလိုမီတာရှိသည်။ ဟုလည်းခေါ်သည် မြင့်မြတ်သောလည်ချောင်း ၎င်းသည်ကြီးမားသောထုံးကျောက်နံရံများကြားမှဖြတ်သွားသောကြောင့်လူသား၏လက်ဖြင့်ဖန်တီးထားသောအပိုင်းများရှိသည်။
Cares မြစ်မှထုတ်လုပ်သောတိုက်စားမှုကိုအခွင့်ကောင်း ယူ၍ ၂၀ ရာစုအစပိုင်း၌Camarmeñaစက်ရုံ၏ရေအားလျှပ်စစ်ကြွယ်ဝမှုကိုအသုံးချရန်ကျောက်များကိုတူးဖော်ခဲ့သည်။ ရလဒ်သည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတောင်တက်လမ်းဖြစ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအလှဆုံးများထဲမှအဆင့်အတန်းရှိခဲ့သည်။
သို့သော်၎င်းသည် linear လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘဲမြို့ပတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုသင်သတိပြုရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းကိုသင် Poncebos ၌စတင်သည့်အခါသင်ပင်ပန်းလာသည်ကိုမြင်လျှင်ဤမြို့သို့ပြန်လာပါသို့မဟုတ်Caíသို့ဆက်သွားပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရီးကအံ့သြဖို့ကောင်းတယ်။
မင်းဒါကိုလုပ်ရင်မင်းမြင်နိုင်တဲ့နေရာတွေထဲကဥပမာတွေကိုငါတို့ပြောလိမ့်မယ် Murallón de Amuesa သို့မဟုတ် ထောင်ချောက်ကော်လာမရ။ သို့သော် Poncebos မှတစ်ကီလိုမီတာသာသာတွင်သင်တွေ့လိမ့်မည် Bulnes ကြိုးဆွဲကြိုးPicos de Europa ၌ကြည့်ရန်အခြားတစ်နေရာသို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်။
Bulnes နှင့် Urriellu
ထရမ့်မီးရထား (သို့) ဓာတ်လှေကားသည်သင့်အားလှပသောမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည် Bulnesသင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည် Texu ချန်နယ်မရ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ရွာကိုမင်းရောက်လာတဲ့အခါထူးထူးခြားခြားသဘာဝမြင်ကွင်းတစ်ခုကမင်းရှေ့ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်။
ခေတ်မီမှုကမင်းဆီမရောက်ဘူးလို့ထင်တဲ့အခွင့်ထူး ၀ န်းကျင်တစ်ခုမှာမင်းကိုထွေးပွေ့ထားပုံရတဲ့အထွတ်အထိပ်တွေနဲ့မင်းကိုမင်းတွေ့လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အစပ်လမ်းကြားတွေမှာကျောက်တုံးအိမ်တွေကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။ ထို့အပြင် အကယ်၍ သင်အနေနှင့်တက်သွားပါ မြို့တော်အမြင်များသည် ပို၍ ပင်အံ့မခန်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤအရာအားလုံးသည်မလုံလောက်ပါက Bulnes သည်ဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည် Urriellu အထွတ်အထိပ်၊ လူသိများသည် Naranjo က de Bulnes ဤတောင်ပေါ်၌နေရောင်သည်အံ့သြဖွယ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအတွက် သင်ခိုလှုံရာသို့တောင်တက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းတွင်သင်တက်လိုလျှင်၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်လမ်းကြောင်းများစွာပါ ၀ င်သောကြောင့်ထိပ်သို့တက်ပါ။
သို့သော်အခြားတောင်တက်လမ်းများသည်လည်း Bulnes မှစတင်သည်။ ၎င်းတို့အနက်၊ သင်ထံသို့ခေါ်ဆောင်သွားသောသူများ Pandébano Colတစ်ဦး Sotres သို့မဟုတ် ၏ရင်းမြစ်မရ။ နောက်ဆုံးအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့နောက်မှပြောကြလိမ့်မည်။
Desfiladero de la Hermida ယခုထိ Picos de Europa ၏ Asturian အပိုင်း၌အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေရာများအကြောင်းငါတို့ပြောခဲ့သည်။ သို့သော် Cantabrian သည်သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ရိုးရာဆွဲဆောင်မှုများပြည့်နှက်နေသောနေရာများနှင့်ဝေးလွန်းသည်။
ဤအချက်ကိုသက်သေထူခြင်းသည် Hermida တောင်ကြားဖြစ်ပြီး ၂၁ ကီလိုမီတာရှည်လျားသည့်ကျောက်နံရံများနှင့်ကမ်းခြေများကြားတွင်ပြေးသည်။ နတ်ဒေဝါမရ။ အမှန်တော့၎င်းသည်စပိန်အားလုံးတွင်အရှည်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဟက်တာခြောက်ထောင်ကျော်အကျယ်အဝန်းရှိသည် ငှက်များအတွက်အထူးအကာအကွယ်ပေးသောနေရာ.
သို့သော်ခံ့ညားသော Hermida အနားသည်အခြားအကြောင်းကြောင့်လည်းအရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်ကမ်းခြေမှလှပသောတစ်ခုတည်းသောလမ်းဖြစ်သည် LiébanaဒေသPicos de Europa တွင်ကြည့်ရန်အခြားအရာများစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သူတို့ထဲကအချို့ကိုငါတို့ပြမယ်။
Santo Toribio de Liébana၏ဘုန်းကြီးကျောင်း
Lebaniego de ၏မြို့တော်၌တည်ရှိသည် ChamelenoSantiago de Compostela နှင့်တူသောဤခံ့ညားသောဘုန်းကြီးကျောင်းသည်ဘုရားဖူးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီမြို့မှာဘာကြည့်မလဲ) ့။ Galician ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကဲ့သို့၎င်းတွင်တစ်ခုရှိသည် ခွင့်လွှတ်ခြင်းတံခါး ၎င်းသည် ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှစ၍ အမျိုးသားအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အစဉ်အလာကိုဂရုပြုပါက၎င်းကို ၅ ရာစု၌ Astorga ၏ဘုန်းတော်ကြီး Toribio မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ယုံကြည်သူတွေအတွက်ပိုအရေးကြီးတာကအဲဒါကိုအိမ်ဆောက်တယ် Lignum Crucisယေရှုခရစ်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားသောလက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းအစ နာမည်ကျော်တို့၏လက်ရာအချို့ကိုလည်းခင်းကျင်းပြသထားသည် Liebana ၏ Beatus.
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည်အဓိကပြီးပြည့်စုံသောအစုအဝေးတစ်ခုဖြစ်သည် သန့်ရှင်းသောဂူရောမခေတ်မတိုင်မီပုံစံ၊ ၁၆ နှင့် ၁၃ ရာစုအသီးသီးတို့မှ San Juan de la Caseríaနှင့် San Miguel တို့၏သင်္ချိုင်းများနှင့် Santa Catalina ဘေးမဲ့တော၏အပျက်အယွင်းများ
Picos de Europa တွင်တွေ့ရမည့်နောက်ထပ်အံ့သြစရာအချက်များ
Santo Toribio de Liébanaဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်အလွန်နီးကပ်သော Potes မြို့သည်သမိုင်းဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုအမျိုးအစားများကိုပိုင်ဆိုင်ထားသောLiébanaဒေသ၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။
၎င်း၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခုမှာကျဉ်းမြောင်းပြီးအစပ်ရှိသောလမ်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးတွင်၊ အထူးသဖြင့်အိမ်၏ဧရိယာတွင်ထင်ရှားသောအိမ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် Solana ရပ်ကွက်မရ။ San Cayetano နှင့် La Cárcelကဲ့သို့သောတံတားများသည်သင်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့် Potes ရဲ့ကြီးမားတဲ့သင်္ကေတကတော့ Infantado မျှော်စင်၁၄ ရာစုမှတည်ဆောက်ခဲ့သောနေ့ရက်များ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောပုံသည် ၁၆ ရာစုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်၎င်းကိုအီတလီအစိတ်အပိုင်းများကိုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သိချင်စိတ်တစ်ခုအနေနှင့်၎င်းသည်အိမ်၏စံအိမ်ဖြစ်ကြောင်းငါတို့ပြောလိမ့်မည် Santillana ၏ Marquisနာမည်ကျော်စပိန်အလယ်ခေတ်ကဗျာဆရာ
Potes the တွင်လည်းသွားလည်သင့်သည် San Vicente ၏ဘုရားကျောင်းဆယ့်လေးရာစုနှင့် ၁၈ ရာစုအကြား၌ဆောက်လုပ်ခဲ့သော Gothic၊ Renaissance နှင့် Baroque ဒြပ်စင်များပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Camaleño၏မြူနီစီပယ်ရှိဤမြို့ငယ်လေးအကြောင်းမင်းကိုပြောခြင်းဖြင့်ငါတို့ Picos de Europa ခရီးကိုငါတို့အဆုံးသတ်လိုက်ပါ။ ၎င်းသည်အမြင့်မီတာရှစ်ရာနီးပါးတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းကိုရောက်ရန်သင်အံ့မခန်းကိုသုံးနိုင်သည် ကေအိုင်အေ ခရီးတစ်ခုကိုရောက်ဖို့သုံးမိနစ်လောက်ပဲလိုတော့တယ်။
Fuente Déတွင်သင်၌အထင်ကြီးစရာတစ်ခုရှိသည် သတိထားပါ ၎င်းသည်အနီးအနားရှိတောင်များနှင့်ချိုင့်များကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းများကိုပေးသည်။ ဒါပေမယ့်လည်းအထင်ကြီးစရာရှုခင်းများပါသောတောင်တက်လမ်းများဖြင့်သင်မြို့သို့သွားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့အနက်မှကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြမည် La Triguera ထိပ်သို့တက်ပါပတ်ပတ်လည်၊ Peña Remonta သို့မဟုတ်ဒါခေါ် ivaliva လမ်းများနှင့် Pembes ဆိပ်ကမ်းများ.
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအံ့ဖွယ်အချို့ကိုပြသခဲ့သည် Picos de Europa ၏မရ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့မင်းပြောခဲ့သလိုဘဲငါတို့ပိုက်လိုင်းထဲမှာထားခဲ့စရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်။ ၎င်းတို့အနက်မြို Arenas de CabralesAsturias တွင်လှပသောနာမည်ကျော်ဗိသုကာများဖြစ်သော Mestas နှင့်Cossíoကဲ့သို့သောနန်းတော်များ၊ အဖိုးတန်သည် Beyos ၏ချောက်Sella မြစ်၏လမ်းကြောင်းကိုအမှတ်အသား ပြု၍ အနောက်ဘက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကို Cantabrian တောင်တန်း၏အခြားအပိုင်းများနှင့်ခွဲထုတ်သည်။ Torrecerredo အထွတ်အထိပ်Picos de Europa ၏အမြင့်ဆုံး၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Espana » ဘာ Picos de Europa မှာကြည့်ရမလဲ